Stardew Valley 1.4 dia misy fiasa vaovao maro amin'ny fanavaozana lehibe | Androidsis
Stardew Valley dia novaina ho 1.4 miaraka amina endri-javatra vaovao maro ao anatin'ny herintaona namoahana
Stardew Valley no lalao indie amin'ny lamaody hamoronana toeram-piompianao sy hahafahanao mandany ora sy ora maro hankafizana ny iray amin'ireo lalao tsara indrindra hitanay tamin'ny Android tato ho ato. ankehitriny Izy io dia manana ny kinova 1.4 izay tonga feno vaovao ary izany dia mampitovy anao amin'ny PC sy ny consoles; na dia mbola tsy misy multiplayer aza.
Anisan'ireo zava-baovao ireo miresaka lahatsoratra vaovao 60 mahery, fomba taovolo maherin'ny 24 na tehina fanjonoana vaovao eo amin'ny lisitra lehibe izay holazainay aminao izao. Lalao izay mahazo votoaty be dia be mba hahafahantsika manohy mankafy ny kanto pixel ary raha manantena izahay fa indray andro any afaka mankafy multiplayer avy amin'ny finday.
1 Ireo fiasa vaovao lehibe an'ny kinova 1.4 an'ny Stardew Valley
2 Ireo vaovao maro hafa izay nafenin'ity fanavaozana vaovao ity
Ireo fiasa vaovao lehibe an'ny kinova 1.4 an'ny Stardew Valley
Efa nananantsika izany tamin'ny taon-dasa ho an'ny tsikera ho tena faly amin'ny seranan-tsambo lehibe vita amin'ny PC. Mbola manana ny multiplayer isika, fa ny kinova 1.4 dia midika fa amin'ny ambaratonga atiny dia mifaninana amin'ny PC sy console izahay, izay manome lanja lehibe ho an'ireo izay mbola tsy nanandrana izany sy ireo izay tafiditra ao amin'ny finday avo lenta.
La 1.4 avy ao amin'ny Stardew Valley Vaovao farany tsara izy io ary azontsika fintino miaraka amin'ireto vaovao ireto:
Amin'ny faran'ny lalao ananantsika fananganana vaovao azo ampifandraisina miaraka amin'ny ho avy sy andrasana multiplayer.
Hetsika vaovao 14 hanomezana fahafaham-po ny ora mahafinaritra anao miaraka amin'ny vadinao.
More from 60 entana vaovao.
Ampiana ny dobo hahafahana mamorona sy manjono ao anatiny.
Taovolo 24 vaovao, lobaka 181 ary satroka, pataloha ary baoty vaovao.
Ankehitriny avela hamindra ireo rakitra lalao izay ananantsika amin'ny PC mankany amin'ny finday.
Lalana mozika 14 vaovao mamelombelona ny fotoana mahafinaritra anao.
Fanamboarana bibikely an-jatony.
Miatrika ny vaovao manandanja indrindra izahay ary lazainay izany satria mbola maro ny zavatra holazainay, na dia tsy hiditra amin'ny antsipiriany rehetra aza izahay. Stardew Valley dia lohanteny izay miaina avy amin'ny atiny, ary na dia mamela antsika hanamboatra ny toeram-pambolainay aza izy io noho ny tanjon'ny lalao dia mila havaozina izy io mba hidirana amin'ireo lahatsoratra vaovao izay manome fomba fijery gameplay hafa.
Ny zavatra manaitra indrindra nefa tsy isalasalana dia ireo entana vaovao 60 ary tsy maintsy hananantsika na amin'ny iraka na amin'ny famokarana azy ireo. Ny tiako holazaina dia inona ampiroboroboana ny asa tanana mba hanohizanay ny famoronana zava-baovao hanomezana ireo karazana famokarana vaovao.
Ireo vaovao maro hafa izay nafenin'ity fanavaozana vaovao ity
Ankoatra ny fahaizana mamorona ireo dobo hanjono ao avy amin'ny toeram-pambolen'ny tenanay, ary hamonjy anay ny lalana mankany amin'ireo renirano akaiky na mankany amin'ny seranan-dranomasina, manana sari-tany vaovao antsoina hoe Cuatro Esquinas koa izahay. Ity sari-tany ity dia natokana ho an'ny multiplayer, noho izany dia mametraka ny fototra izy mba hahafahantsika mankafy ny lalao ankafizintsika amin'ny ho avy.
Ny fisongadinana iray hafa an'ny Stardew Valley 1.4 dia ny toerana roa tao an-tranonay dia nitombo avo roa heny ary izany dia mamela antsika hametraka fanaka bebe kokoa. Ho an'ny ampahany izay miankina amin'ireo toeram-pitrandrahana dia misy monster vaovao roa ary ambaratonga hafa roa vaovao mifangaro an'ny toeram-pitrandrahana.
Stardew Valley koa dia nanisy fanatsarana maro hanatsarana ny fiainana ny menio ary izahay avelao mihitsy aza ny fidirana amin'ny mombamomba ny mponina tsirairay ny tanàna hahafantarana ny fifandraisana ara-tsosialy ananantsika miaraka aminy; efa fantatrao fa lalao manasongadina ny fiaraha-monina ity.
Tokony hampahatsiahy anao izany izahay raha manana lalao voatahiry ianao amin'ny kinova 1.3 teo aloha, tsy mendrika ny hampiasana azy io raha manavao ny kinova 1.4 isika. Ka mahaliana anao ny manavao io lalao io amin'ny fanondranana farany ny lalao amin'ny kinova farany.
Tsara Stardew Valley izay havaozina amin'ny kinova 1.4 ary manohy mametraka fototra bebe kokoa izy io ho lasa iray amin'ireo lalao tsara indrindra ananantsika ankehitriny amin'ny Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Stardew Valley dia novaina ho 1.4 miaraka amina endri-javatra vaovao maro ao anatin'ny herintaona namoahana
Manidina maimaim-poana amin'ny ady 4v4 natolotry ny Kick-Flight sy ny lalao mampiankin-doha
Samsung sy LG dia mikasa ny handefa mpanara-maso hifandraisanao amin'ny findainao